Takachengeteka zvakadii makore makumi maviri mumashure paGunyana 11? Kushamisa!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Wtn » Takachengeteka zvakadii makore makumi maviri mumashure paGunyana 11? Kushamisa!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau • Wtn
Dr. Peter Tarlow anogovera pfungwa dzake pakuenzanisa kushambadzira kwekushanya uye zvido zvekuchengetedza
Kufamba nhasi kwakanyanya kuomarara kupfuura zvaive makore makumi maviri apfuura. Muchokwadi, indasitiri yekushanya yakachinja zvakanyanya uye nekukurumidza zvekuti chero chero chinhu chakataurwa nezvayo chinobva changove chisingachashandi. Makore makumi maviri apfuura, vashoma vangadai vakafungidzira kukuvara kwehupfumi uye kufa uko COVID-19 yakakonzera, kana kutonga munharaunda kwakakonzerwa nedenda. Kuisa zvinhu nemaonero, musi waGunyana 11, 2001, vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vakafa muzuva rimwe chete. Zvino munguva ye COVID-3,000, denda rakauraya vanhu vanopfuura mamirioni mana.
The World Tourism Network Mutungamiriri, Dr. Peter Tarlow, vakaburitsa mushumo wakadzikama unoratidza makore makumi maviri kubva munaGunyana 20, 11, uye mafambiro ari kuita nyika yekushanya nekushanya.
Kunyangwe vanhu vazhinji vachiri kurangarira mazuva akasiririsa iwayo, pari zvino paine chizvarwa chese chakazvarwa mushure maGunyana 11, 2001. Kwavari 9/11 chiitiko chenhoroondo chakaitika kare kare.
Iyo 2020-21 COVID-19 denda rakagadzira seti nyowani yematambudziko ezvekushanya. Kune vechidiki vazhinji havagone kufungidzira nyika yekufamba isina zvirambidzo uye vakawanda kwazvo havazive kuti hwaro hwezvakawanda zvatinorambidzwa kufamba zvine midzi yavo mune zvakaitika munaGunyana 11, 2001.
Mukati memakumi maviri emakore apfuura, vezvekushanyirwa uye vezvekufambisa vakasvika pakuziva kuti fungidziro yekare yekuti "chengetedzo haiwedzeri chinhu kumucheto" haisisiri yevakuru veVashanyi nhasi vanoona kuchengetedzeka sechikamu chakakosha chezvavanoita kushambadzira. Kuchengetedzwa kwekushanya uye mapurisa, aimbova mwana wekurera wenyika yekushanya uye yekushanya, ikozvino chikamu chakakosha cheindasitiri.
Vatengi vevashanyi nevekufamba havachatya kuchengetedzeka; ivo vanogamuchira zvese zvese nezvayo, kubva kupokana nehugandanga matanho kusvika kunhau dzehutano hweveruzhinji. Vafambi vanobvunza vashambadziri nezvazvo, dzidza nezvazvo, uye shandisa matanho ekuchengetedza sechinhu chikuru mukutora sarudzo. Zvakare, muCOVID-19, veruzhinji ikozvino vanoona matanho ehutano sechikamu chekuchengetedza kwekushanya.
Imwe yenzira idzo nguva nyowani yekuchengeteka iri kuuya iri mukukura kwemauto akachengetedzeka akazvimirira (anozivikanwawo mune dzimwe nzvimbo dzenyika semapurisa akazvimirira).
Kuchengetedzwa kwakazvimirira, pamwe neTOPPs (yekushanya-yakatarisana nemapurisa uye basa rekuchengetedza) zvikamu izvozvi zvave zvinhu zvakakosha zveindasitiri inobudirira yekushanya. Chokwadi ichi chiri chechokwadi kunyanya munyika, senge United States nedzimwe nzvimbo dzeLatin America, uko kune kupokana-nemapurisa kunoperekedzwa nemafungu ematsotsi ari kuwedzera uye munzvimbo dzakanangana nedziviriro.
Kunyangwe aya ekuzvimiririra ekuzvidzivirira asingawanzove nekodzero yekusungwa, iwo anopa hupo uye nekukurumidza mhinduro nguva.
Saka nekudaro, munguva yekuwedzera kusagadzikana kwezvematongerwo enyika nehupfumi, kuchengetedzeka kwakazvimirira kune dzimwe nzvimbo dzekushanya kwave sarudzo yekutarisa.
Yakavewo sarudzo yekutarisa kune hurumende dzemaguta dzakatarisana nechido cheveruzhinji chekudzivirirwa uye kurerukirwa pamitoro inorema yemitero. Mumakore makumi maviri apfuura, veruzhinji vauya kuzotarisira imwe nzira yekuchengeteka kwete kwete chete kunhandare dzendege asi kunzvimbo dzakadai senzvimbo dzekutengesera, nzvimbo dzekutandarira / mapaki, nzvimbo dzekufambisa, mahotera, nzvimbo dzekuitira gungano, ngarava dzezvikepe, uye zviitiko zvemitambo.
Kunyangwe paine zvakawanda zvakagadziridzwa pasirese yekushanya kuchengetedzeka uye TOPPs, kuchine zvakawanda zvekuita.
Maitiro isu isu muindasitiri yekushanya tave tichiita mukati memakumi emakore apfuura
Pamwe hapana chikamu chekushanya chakagashira kutarisisa kuzhinji pasirese seindasitiri yendege. Makore makumi maviri apfuura anga aine kukwira nekudzika kwavo kune indasitiri yendege, ne2020 iri indasitiri yakanyanya kuderera pasi. Hapana mubvunzo kuti nendege chikamu chakakosha chekushanya: pasina kutakurwa nendege, nzvimbo zhinji dzinongofa, uye traffic yemhepo chikamu chakakosha mubhizinesi rezororo rekushanya pamwe nekutengeserana, kufamba bhizinesi, uye kutumira kwezvinhu.
Kufamba nendege nhasi hakunakidze zvakanyanya kupfuura zvaive makore makumi maviri nerimwe apfuura kana makore maviri apfuura. Vafambi vazhinji vanobvunza kana ese matanho aya akakosha kana kushamisika kuti angave asina musoro, anoparadza, uye asina chinangwa. Vamwe vanotora maonero anopikisa. Mune nguva yematenda, kuchengetedzwa kwekufamba nendege hakusi kwekuchengetedza ndege chete, asi zvakare nezvekuita chokwadi chekuti zviteshi zvakachena uye kubata mukwende hakuparadzi hutachiona.
Kwete chete kuti mitsva yekuchengetedza mirau yakaita kuti hupenyu huome kune vafambi, asi zvakare dzakawanda nzira dzevatengi dzakaramba. Kubva pakudya kusvika pakunyemwerera, ndege dzendege dzinongopa zvishoma uye dzinowanzoita sedzisingabate munzira yavanobata vanhu. Saka, zvinoodza moyo kuti zvishoma zvakaitwa mukuchengetedzwa kwekufambisa nendege. Vatengi vakawandisa vanoshamisika kana kuchengetedzeka kwendege kuri kuita zvakanyanya pane kushanda.